स्टेजमा गीत गाउँदा मलाई कपालले कन्फिडेन्ट्स दिन्छ — गायक धिरज राई - Gufgaf : Nepal ko entertainment web site : Nepali cinema & Gossip : Nepali comedy : Video & jokes : celebrity interview : Nepali art ,music , manoranjan & more
स्टेजमा गीत गाउँदा मलाई कपालले कन्फिडेन्ट्स दिन्छ — गायक धिरज राई
२५ कार्तिक २०७४, शनिबार ११:०० 6
गायक धिरज राईले हालै मात्र नयाँ एल्बम ‘लव ब्यालेन्स’ सार्वजनिक गरेका छन् । उही यतिबेला यहि एल्बमको प्रमोशनमा हिँडेका छन् । नेपाली माईकल ज्याक्सनको रुपमा परिचित उनी सांगीतिक कार्यक्रमको सिलसिलामा ४२ देशमा पुगिसकेका छन् । ३२ पटक त उनी हङकङ नै पुगेका छन् । धेरैले उनलाई सबैभन्दा धेरै पटक हङकङ जाने कलाकारको रुपमा गिनिज बुकमा नाम लेख ! भनेर समेत जिस्क्याउने गरेका छन् । धिरज राई गायनका अलावा स्टाईलका कारण पनि चर्चित छन् । उनको लामो कपालले उनलाई फरक परिचय दिएको छ । एल्बम ‘लभ ब्यालेन्स’को प्रमोशनको क्रममा हामीले उनीसँग उनको लामो कपालको बारेमा केही प्रश्न गरेका छौँ ।
कपाल किन पाल्नु भयो तपाईँले ?
स्टेजमा गीत गाउँदा मलाई कपालले कन्फिडेन्ट्स दिन्छ । कपाल जति चल्छ मलाई पफर्म गर्न उत्ति नै मजा आउँछ । मैले एक पटक अलि छोटो बनाएको थिएँ । अनि फ्यानहरुले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत पहिलेकै लुक्स चाहियो भन्नुभयो । यहि कारण पनि मैले कपाललाई निरन्तरता दिएँ ।
कति वर्ष भयो कपाल नकाटेको ?
तीन वर्ष जति भयो । तीन वर्ष अघि काटेको थिएँ त्यसपछि काटेको छैन ।
कत्तिको गाह्रो छ यसको स्याहार गर्न ?
सबैले कपाललाई स्याहार गर्न कति गाह्रो हुन्छ होला तिमलाई भन्छन् । तर सजिलो छ । एक हप्तामा तीन दिन जति नुहाउँछु । मेरो आमा बुवाको पनि राम्रो भएका कारण होला मेरो कपाल पनि स्वस्थ छ ।
स्याम्पु कुन प्रयोग गर्नुहुन्छ ?
मलाई यहि ब्राण्डको चाहिन्छ भन्ने छैन । जुन भएपनि हुन्छ । म स्याम्पु कमै प्रयोग गर्छु । तर मैले सकेसम्म कागती भएको स्याम्पुहरु प्रयोग गर्छु ।
नयाँ एल्बम सार्वजनिक भएको छ‘लब ब्यालेन्स’। यसको प्रतिकृया के छ ?
तीन वर्ष पछि मैले यो एल्बम सार्वजनिक गरेको हुँ । अहिले यसकै प्रमोशनमा छु । यसमा माया प्रेममा भाव बोकेका गीतहरु समावेश भएका छन् । प्रतिकृया पनि राम्रो आएको छ ।
‘साढे सात’को पहिलो गीत ‘गजब हुनेछ’सार्वजनिक
रोयल्टी संकलन समाज बिरुद्धको मुद्धामा अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने उच्च अदालतको ठहर
छोराको जन्मदिनमा टाढा हुँदा पशुपति दुखि
बिश्वास थिएन पर्ख पर्ख मङ्गलम राख्नु हुन्छ भनेर त्यहि नै पो मन पराउनु भयो —दिपक शर्मा